Kooxo hubeysan oo caawa mas’uul hore ku dilay Degmada Boondheere. – Shabakadda Somalibile Media
Kooxo hubeysan oo caawa mas’uul hore ku dilay Degmada Boondheere.
Kooxo hubeysan ayaa Caawa waxaa ay qeybo ka mid ah degmada Boondheere ee Gobolkan Banaadir ku dileen Guddoomiye kuxigeenkii hore ee Amniga iyo Siyaasada degmadaas oo lagu Magacaabi jiray Cali Hilowle (Cali dheere).
Rag bustoolado ku hubeysnaa oo watay Mooto VIKON. ayaa la xaqiijiyey inay ku dileen agagaarka Isgoyska degmada Boondheere,isla markaana dilka kadib ay goobta ka baxsadeen.